Cardinal uRichelieu wazalelwa e-Paris ku 5 Septhemba ngonyaka 1585. Uyise wayengumGreki omunye abangane abaseduze zeNkosi uHenry III, Lijaji Lelikhulu France, Fransua Dyu Plessis. Eminyakeni eziyisishiyagalolunye, umfana wathunyelwa College of Navarre, kamuva wafunda kwesinye sezikole ephakeme eParis. Ngo 1606-m Ngokuzayo Cardinal uRichelieu wathola okuthunyelwe yakhe yokuqala ngemva kokuba bamiswe umbhishobhi Lyusonskim. Eminyakeni embalwa umfundisi osemusha wahlala yasePoitiers, ayekuyo besifunda-bhishobhi. Nokho, ngemva kokufa iNkosi uHenry IV, nsizwa yabuye yabuya eParis ujoyine eyodwa imisinga kwezombangazwe, okwakusho ukuthi besho. Lokhu kwenzeka ngo-1610.
Maduze angenza ujwayelene nabantu ezintsha enhloko-dolobha, nangayiphi ngesilinganiso esincane nomthelela enzeke olwengeziwe. Isenzakalo esibalulekile kwaba umhlangano yombhishobhi abasha ukuthi ngemva kokufa Concini - intandokazi ye ongumfelokazi Queen Marii Medichi. Italian adunyiswe unenkululeko kwengqondo nemfundo uRichelieu baba protégé yakhe futhi lacelwa ukuba lijoyine okubizwa ngokuthi "Spanish" party. ngokushesha uRichelieu waba omunye wemizila ebaluleke kakhulu abeluleki ibamba.
Ukuhlanganyela izingobe esigodlweni futhi isixhumanisi
Ngo 1615 eFrance, kukhona umcimbi obalulekile: abasebasha iNkosi uLouis XIII lokushada Spanish inkosazana Anne-Austria. URichelieu iba ongokomoya of the Queen osanda kubalwa. Ngemva konyaka ezandleni zakhe empeleni abe zonke ezindabeni zamazwe ngamazwe umqhele French. Ngo 1617 wavuthwa yinkosi enquma ukuqeda ukuwa sokufa. Nge lo msebenzi kuze kube ababulali zokugcina bathunyelwa. URichelieu ngokusebenzisa ejenti ayo wathola izindaba lomcimbi esizohlasela kusengaphambili. Kodwa esikhundleni sokuzama ukuvimbela ukubulawa schemer nsizwa yenza ukubheja zakudala: Buyela emuva uncamela ube ngumsizi wabaningi, phezu namandla kakhulu. Nokho, ukubala bekungelona. Ukuvela ekuseni enkantolo yaNkulunkulu, uyiNkhosi yaka siyakuhalalisela esikhundleni ukubingelela obekulindelwe, wathola edilini cool futhi empeleni axoshwe egcekeni iminyaka eyisikhombisa. Ekuqaleni ke isuswe Blois uMaria de 'Medici (unina senkosi esencane) futhi kamuva e yeLuzon.
iminyaka Brilliant cardinal French
Ngo 1622, uRichelieu yayizimisele ibandla elisha san: manje yena Catholic Cardinal. Ukubuya esigodlweni wayeseGibithe 1624. Lokhu lula ukubuyisana ka uLouis XIII nomama wakhe. Ngesikhathi esifanayo, Cardinal uRichelieu kuba cishe ungqongqoshe wokuqala wenkosi. Lokhu kwabhebhethekiswa ngenxa izingobe ngaphakathi isimo, okuyinto wasongela France, futhi ikakhulukazi Bourbons, ukulahlekelwa nobukhosi bawo lapho sibhekene abakwaHabsburg Austrian neSpanishi. King wayibhalela nje idinga umuntu ovuthiwe kulezi zindaba, abazokwazi kute simo sibuyele kulesetayelekile kumibuthano ephakeme ukhomba ngophakathi. Yaba Cardinal uRichelieu. Eminyakeni eyalandela kwakumane brilliant ngempela sokuthi uNgqongqoshe lokuqala French. Ngesisekelo ohlelweni lwakhe bekulokhu nokuqinisa absolutism futhi amakhosi ohlanga kuleli zwe. Futhi beyithela khulu ukwakha ke ngezenzo zabo: Amakhosi edlubulundayo babulawa, wabhubhisa amakamu abo, phakathi aristocrats bavinjelwa Duel wabhubhisa Huguenot ukunyakaza, kungagcini laseMagdeburg umthetho edolobheni. Cardinal besekele izikhulu zobuProthestani eJalimane, ababemelene njengombusi woMbuso Ongcwele WamaRoma Empire of the German isizwe futhi ngaleyo ndlela ngideleleke yakhe. Engxenyeni namathathu banesifo esibi ngenxa empini Spain emhlane French uLorraine Alsace yesibili. Cardinal uRichelieu wafa ngo-December 1642-dolobha.
Ifa uNgqongqoshe French
lokungcolisa eside akayekanga kuphela emlandweni nezombangazwe zaseYurophu, kodwa futhi emhlabeni yobuciko. Ngokuphindaphindiwe uvele sici amafilimu emelela France ngesikhathi, Cardinal uRichelieu. Izithombe ekumeni of ngaye omunye liyabonakala kakhulu emthaleni lezinombolo ebaluleke kunazo zonke eYurophu ezikhathini zanamuhla.
Izizathu ukuvelela eMoscow
Ragnarok - lokho oyikho lapho kuyofika?
Crane - umsebenzi yafuna futhi ohlonishwa
Usizo lokuqala lokumisa
Radeon HD 8670M. Ihluzo ikhadi Radeon HD 8670M